KOOXDA PARIS FRANCE
Janawari 28, 2020Janawari 28, 2020| maamulmaamul| 0 Faallo
Hel 120 € gunno Unibet ah oo leh koodhka WINCOMPUNI
nabadgelyada macaamilku waa la damaanad qaaday Unibet, oo waxaad heleysaa dabacsanaan wanaagsan oo aqbala hababka lacag bixinta ee kala duwan. Lacag laguugu shubo koontadaada, waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho kaarka deynta Visa ama MasterCard, horay loo sii iibsaday (PaySafeCard, Bixinta tigidhada…), laakiin sidoo kale in lagu sii wado boorsada elektiroonigga ah sida PayPal ama Moneybookers. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax ujuuro ah oo lagu soo dallacay sharad kasta iyo qadarka ugu yar ee deebaajiga ayaa ah midka ugu hooseeya suuqa.
Hadaad rabto inaad soo jiidato ama aad kasbato dheelitirkaaga, oo bixiya adeeg kaliya wareejinta bangiga, taas oo xadidan. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan ajuuro dheeraad ah oo la soo dallacaa mar labaad.
100% Ilaa iyo £ 100
100% Illaa £ 200
Unibet soo dhawayn gunno ah: shuruudaha iyo shuruudaha koodhka xayeysiinta
Si aad iskaga diiwaangeliso unibet, waa inaad joogtaa Beljamka. Waxaad u baahan doontaa inaad ku qorto lambarkaaga oo wata aqoonsiga Diiwaanka Qaranka.
Cayaaraha isboortiga uma banaana inuu u furnaado ciyaartoy da 'ahaan ugu yaraan jira 18 sano. Loogu talagalay khamaarka iyo khamaarka, ugu yaraan ayaad noqon doontaa 21 sano.
code code unibet waxaad furi doontaa soo-bandhigyada soo dhaweynta ah "daqliga labada magac ee ugu horeeya ee aad ugu magac dartay" waxay qusaysaa bilawga ciyaarta ka hor iyo sharadka nool.. Waxaad ka heli doontaa dhammaan faahfaahinta soo-jeedintan oo laga helayo hawlwadeennada websaydhka.
Faahfaahinta gunnada Unibet
Waxaa loogu magac daray mid ka mid ah kuwa ugu hooseeya sanadkii hore qaddarka lacagta Faransiiska, Gunnada Unibet waxay ka farxineysaa ciyaartoygu deeqsinimada iyo fududeynta helitaanka (halkan ka hel). Tirada ugu badan ee 120 € waa suuq weyn oo gunno noocan ah ah, iyo shuruudo aad u fudud oo la helay. Ka dib markii si qoto dheer loo falanqeeyey xaaladaha, waxaan jeclaan lahayn inaan ku soo koobo dhamaan sadarka hoose.
Sidee gunnada Unibet u shaqeyso
1 sharad sharad la soo celiyo Unibet, la heli karo markii aad dhammeysid tan oo aad tiraahdid lambarka WINCOMPUNI si sahal ah ayuu ugu shaqeeyaa. Ciyaartoy kasta oo cusub, dhig kan ugu caansan ee beddalaya sharadka koowaad Pierre Ménès ayaa si buuxda loo ciyaaray, haddii lumo. Shuruudda kaliya ayaa ah in lagu sharaxo suurtagalnimada ugu yaraan 1,40, Maxaa haray oo dhan ka dib markii si weyn loo awoodi karo. Shuruud la taaban karo? Kadib markii aan furay oo saxeexay koontayda Unibet iyada oo loo sii marayo xiriirkan rasmiga ah ee leh lambarka WINCOMPUNI, Waxaan go’aansaday inaan sharad ku bixiyo € 120 labada ciyaar ee la isku daray iyo qiimeynta guud ee 4,00. Waxaan qiyaasayaa taas? Waan helay 360 Nadiif ah oo jaakadayda ayaa u sii kacaya ilaa € 480. Ha gudbin? Ha walwelin, Waan helay 120 Bilaash bilaash ah si aan aniga lafteyda u sameeyo. Waa inaan la iloobin.
Waxaad ogaan doontaa haddii aad xaqiijiso in koontadaada aan la sameynin markii ugu horeysay khamaarkaaga, Unibet si otomaatig ah ayey kuugu wareejin doontaa 50% sharadkaaga koowaad, iyo ta kale 70% ansax ka dib (70 € hadaan dhigo 120 €). Tani waa sababta aan kugu dhiirigelinay inaad ansaxiso koontadaada sababtoo ah diiwaangelintaada boggan..
Xadka sharadyada ayaa laga heli karaa Unibet
Unibet, waad kufadin kartaa wax walba, iyo sidoo kale isboorti caan ah (kubada cagta, kubbadda koleyga, kubad laad…) iyo wax yar oo la yaqaan (Cricket-ka Pesapallo, darts, baaskiil). Waxa kale oo aad ku doodi kartaa siyaasada ama guuleystaha bandhigga xaqiiqada ee soo socda (tusaale ahaan, X-Xaqiiji).
Ciyaaraha, waad khayaami kartaa ka hor ama inta lagu gudajiro dhacdada, kali ama isku darka. Xaaladdan oo kale, waxay u badan tahay inay kordho, sida macaashka. Dhanka kale, waxay ku saabsan tahay tagista Paris oo ay kujirto gacmo gacmeed sax ah oo leh faa'iidooyinka jeebka.
Sidoo kale waad dhigi kartaa nidaamka sharadka. Si ka duwan sharad la isku daray, waad guuleysan kartaa, xitaa haddii dhammaan talo aan caddaalad ahayn.
Ugu dambeyntii, waxay bixisaa khaas ah Unibet gaar ah (MultiMax / Toto Super / Dhibcaha Super), laakiin sidoo kale BetUp, qaso su'aalaha iyo sharadka ciyaaraha.
Ku saabsan nooca sharadka, waxaa jira tusaale ahaan:
1N2: Ku guuleystaha koox of 1, 2 ama sawir
Laba fursad: koox guul iyo 1 sawir / barbaro oo guuleysta kooxda 2 / Guul Kooxda 1 ama koox guuleysato 2
Ku guuleysashada kubbadda gacanta naafada Anderlecht ee ka horimaanaysa Standard iyadoo lagu kala saarayo 2,5 buts (Anderlecht 2,5)
Tirada goolasha laga dhaliyay ciyaar / waqtigeyga
Si lagaaga caawiyo inaad sharad, tirakoobyada la heli karo. Kulan kasta, waxaad gashaa macluumaadka soo socda:
Xaaladda labada koox
Wajigooda ugu dambeeya ee fool ka fool
Ka weyn / Under, domicile / dibedda iyo 1/2 badh
Gunnada Unibet Sport : taladeena
Kadib markaad furato oo saxeexdo ciyaartoy xisaabtaada Unibet ee boggan gaarka ah, Hawl wadeennadu waxay u qalmaan in ay soo booqdaan fikradeena Unibet, daqiiqaddii ugu xiisaha badneyd ayaa timid: dhigista sharadkaaga ugu horreeya hawl wadeennada. Intaas ka hor, waxaan kugula talineynaa inaad geliso, haddii miisaaniyaddu saamaxdo, xaddiga 120 Qiimaha koontadaada. Sababta? Si fudud sababtoo ah waa midka aad ku gaari doonto soo laabashada sharafta ugu badan ee bilaashka ah, wixii ay ballanqaadeen bookmakers. Wax kale oo muhiim ah, Ha iloobin in kaliya marka ugu horeysa ee laga adkaado ay kuu banaan yihiin gunno. Hadaad tuurto 120 € oo waad khayaamaysaa tusaale ahaan 5 paris 20 € kaliya 20 Lacagta sharadka ah ee bilaashka ah waxaa lagu siin doonaa gunnada soo dhoweynta ah ee laga heli karo halkan. Ugu dambeyntii, maskaxda ku hay in ujeedka ugu dambeeya uu yahay inaad ku guuleysato sharadkaaga koowaad. Waxaa ugu wanaagsan in la isku dayo in la helo 200 € net saami macquul ah, halkii la ciyaari lahaa 24,00 qiimeyn isku-dhafan oo aan dhaafi doonin. Gaar ahaan maadaama kaliya faa'iidada saafiga ah ee ay ku guuleysteen sharadka bilaashka ah lagala baxayo lacagta dhabta ah (in la ogaado haddii aan helo 120 € free sharad iyo ku guuleysto sharad la mid ah 2,00, waxaan awoodaa inaan soo jiito oo kaliya 120 € ama kayar faa iidooyinka bilowga ah).
Hore Dhejintii hore: Unibet France
Xiga Dhejinta dambe: 1xBet
© Xuquuqda daabacaadda 2019 - Sirat WordPress Theme